'म गफ गर्न होइन, काम गर्न आएको हुँ'
सुजीतकुमार झा जनकपुर, २५ भदाै
प्रदेश २ को नीति आयोगको उपाध्यक्षमा हालै मात्र डा. भोगेन्द्र झा नियुक्त भएका छन् । नवनियक्त उपाध्यक्ष डा. झाले प्रदेशको समग्र स्थिति र योजनाका कामलाई तीव्रता दिने गरी काम गर्ने बताएका छन् । सबैले अपनत्व लिनेगरी प्रदेशका सबै जिल्ला, क्षेत्र र सरोकारवालासमक्ष पुग्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशमा जनअपेक्षाअनुसार विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला आयोगले अब कस्ता कदम चाल्दै सरकारलाई कसरी सहयोग गर्छ त ? खासगरी यिनै विषयमा केन्द्रित रही नीति आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. झासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
नीति आयोगको उपाध्यक्षमा हालै मात्र तपाईं नियुक्त हुनुभएको छ, तपाईंबाट प्रदेश २ का जनताले के अपेक्षा गर्ने ?
हेर्नुस्, नीति आयोग प्रदेश र यस प्रदेशका जनताकै लागि हो । खासगरी यसको नाम नीति तथा योजना आयोग हुनुपर्ने हो । प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, सन्तुलित र दिगो विकासका लागि आवधिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न तथा नीतिको अनुसन्धान तथा विकास र प्रदेश सरकारलाई सल्लाह–सहयोग प्रदान गर्न यो आयोग गठन गरिएको हो । यसर्थ, म प्रदेश र जनताको वृहत्तर हित र विकासका लागि नै आएको हुँ । मैले इमानदारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निभाउनेछु ।
यस प्रदेशका जनता सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेशमा विकासले गति लिन नसकेको जनगुनासो व्याप्त छ । मन्त्रीहरू भने कानून निर्माणमा लागेकाले अरु काम प्रभावकारी हुन नसकेको भनेर टार्दै आएका छन् । यस्तो चुनौतीलाई तपाईंले अब कसरी पार लगाउनुहुन्छ ?
हाम्रा लागि प्रदेश नयाँ अभ्यास भएकाले सुरुका केही दिन अल्मलिनु अस्वाभाविक होइन । तर, सधैं नयाँ भनेर बहानाबाजी चल्दैन पनि । हनिमून पिरियड सकिएको छ । संघीयता भनेकै समावेशी विकासका लागि हो । जनताले गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो । एकातिर, प्रदेश आफैं अल्मलिएको अवस्था छ । अर्कोतिर, संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्वको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विकास कसरी हुन्छ ? जनताले गुनासो किन गर्दैनन् ? अब हामीले सोचेर सम्झेर अघि बढ्नुपर्छ । आगामी दिनमा नीति, ऐन, कानून निर्माणलाई आधार बनाएर विकासे आयोजनाका कामतिर अग्रसर हुनुपर्छ । प्रदेशको ग्रोथ रेट कसरी बढाउन सकिन्छ, रोजगारीको सृजना कसरी गर्न सकिन्छ, अब त्यतातर्फ ध्यान जानुपर्छ । प्रदेशमा लगानी भित्र्याउने काममा लाग्नुपर्छ ।
नीति आयोगको आफ्नै कार्यालय व्यवस्थित छैन, प्रदेशको समग्र विकास र नीति आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतले तपाईंको प्राथमिकता कुन क्षेत्रमा बढी रहनेछ ?
निश्चित रूपमा अहिलेको कार्यालय कुनै परेवाको खोर जस्तै लागिरहेको छ । ४९ जना कर्मचारी रहेको कार्यालयमा ५ जनासम्म बस्न सक्ने स्थिति छैन । यूएनडीपीका पदाधिकारीहरू आउँछन् कुनै योजनालाई लिएर, उनीहरूलाई बसाउने कहाँ ? यो समस्या छ । बजेट उपलब्ध नगराइएको पनि होइन तर स्थिर हुन सकेन । यो सब व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । खालि सरकारलाई दोष दिएर हुँदैन । यहाँका पदाधिकारीहरूकै कारण यसको कार्यालय व्यवस्थित हुन नसकेको मलाई लागिरहेको छ । मेरो पहिलो प्राथमिकता कार्यालय व्यवस्थापन गर्नु नै रहनेछ । यसका साथै प्रदेशको नीति आयोगले दिर्घकालीन सोच राख्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म डाटाबिना नै काम गरिँदै थियो । अब डाटा बेसकै आधारमा काम अगाडि बढाउनेछौं । यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रदेशको प्रोफाइल निर्माण गर्नेछौं । प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्छौं । यहाँ बजेट नभएको होइन, तर कुन परियोजनाका लागि हो ? त्यो स्पष्ट छैन । यसले बजेट दुरुपयोग हुने खतरा हुन्छ । यसबाट बचेर नीति आयोग अगाडि बढ्नेछ ।
प्रदेशलाई कृषि र पर्यटनले नै धान्न सकिने कुराहरू खूब आउँथे तर अहिलेसम्म तिनै क्षेत्रमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन नि ?
त्यो सब अक्षरमा छ तर व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा नारा नै थियो– ‘खेत खेतमे पानी, हात हातमे रोजगार’ । यसको अर्थ के थियो भने सिँचाइको अभावका कारण कृषिको उत्पादकत्व घट्दै गइरहेको छ । यो समस्या समाधान गरियो भने स्वाभाविक रूपमा कृषि उत्पादन बढ्छ, कृषि उत्पादन बढ्नेबित्तिकै त्यहाँ रोजगारी बढ्छ, रोजगारी बढेपछि जीडीपी बढ्छ । यसले प्रदेशको विकास हुन्छ । यसका साथै यस प्रदेशका लागि पर्यटन पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । धार्मिक पर्यटन मात्र होइन, यहाँ अनेकौं नदीनालाहरू छन् । यहाँ कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष छ । कृषि पर्यटनलाई नै पनि विकास गर्न सकिन्छ । ती सबैको समूचित विकास गर्न सकियो भने प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रले फड्को मार्ने छ र रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुनेछन् । यी सबै क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास सकियो भने देशका साथै प्रदेशको पनि विकास हुन्छ र संघीयता सफल हुन्छ । संघीयता सफल भयो भने प्रदेश २ सफल हुन्छ । किनभने संघीयताको जननी नै प्रदेश २ हो ।
कृषिमा रहेको विद्यमान समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
यसै वर्ष अनावृष्टिका कारण ३० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि उत्पादनमा कमी आउने सम्भावना छ । यसअघि २५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषि उत्पादन भएको थियो । यो अनिश्चितता नै मूल समस्या हो । यसले सबैको चिन्ता बढाएको छ । यसलाई समाधान गर्नका ठूला नदीहरूको माध्यमले सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । किसानलाई ‘सब्सिडी’ दिनुपर्छ भन्ने पक्षयमा म छैन । किसानको उत्पादनको मूल्य कसरी बढाउने त्यस दिशमा पहल गरिनुपर्छ । कृषि निर्भर उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सामूहिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । यसले कृषि रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले सब्सिडीको व्यवस्था गर्न सक्छ । कृषि रुपान्तरणमा जोड दिइयो भने उद्योगहरू प्नि बढ्छ र यसले आर्थिक वृद्धि पनि हुन्छ ।
प्रदेश सरकारका विभिन्न योजनाहरू कार्यकर्ता पाल्नकै लागि रहेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ नि ?
यो सब नकारात्मक धारणा हो । राजनीतिज्ञलाई आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई यस्तै कृषि रुपान्तरण वा अन्य कुनै क्षेत्रमा सब्सिडी दिएर कार्य गराउन लगाइयो भने सामाजिक रुपान्तरण पनि हुन सक्छ र राजनीति पनि स्वच्छ हुँदै जान्छ । यदि यी योजनाहरू कार्यकर्ताहरू पाल्नकै लागि ल्याइयो भने यसले दिगोपना आउन सक्दैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २६, २०७६, ०१:३८:००